Tafakatra ho amin’ny famaranana ny “The Voice”, fifaninanan-kira sy hatsaram-peo karakarain’ny fahitalavitra fratsay TF1, i Marghe na Margherita Davico, fa izay no tena anarany feno.
vendredi, 07 mai 2021 22:01
Nisy fiaramanidina kely amin’ny karazany “Pilatus PC-12” niantsona tao amin’ny seranam-piaramanidina Arrachart Antsiranana androany zoma 7 may 2021, tamin’ny 3ora sy 16 minitra tolakandro.
vendredi, 07 mai 2021 21:14
jeudi, 06 mai 2021 14:15
mercredi, 05 mai 2021 07:47
Notanterahina tamin’ny fihaonana ampitain-davitra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena ny talata 04 mey 2021. Zato (100) mahery ireo Solombavambahoaka nanatrika izany, ary nisy ihany koa ireo tonga nivantana niatrika izany tao amin’ny efitrano fivoriana ao amin’ny Lapan’i Tsimbazaza.
mercredi, 07 avril 2021 12:49
Maty ny zoma alina 02 aprily 2021 tao amin'ny Hopitaly Befelatanana ny Tale Jeneralin'ny Trano fiantohana Ny Havana, Randriantiana Andriantsoa Olivier. Hiainga eny amin'ny hopitaly ihany ny razana anio sabotsy 03 aprily amin'ny 1ora tolakandro, ary avy dia asitrika eny amin'ny Fasan'ny Mpiandry eny Betela Fiaferana.